Qhubekani uhambo ehlathini e Jungle Spirit: Call of the Wild slot. Deep ngaphakathi ehlathini, ke uba manzi ngenxa yokukhala, ezinomswakama kanye nekhaya izilwane eziningi eziyingozi kanye nemisindo kwangethusa. Lokhu mobileslots kusukela NetEnt kuyinto esondweni ezinhlanu futhi 243 izindlela ukuze ukunqoba slot.
Lokhu mobileslots lakhiwa NetEnt. Le nkampani iye ngokudala imidlalo kungukuthi nje ukujabulisa kodwa beze nge ihluzo bright kanye nezici ezintsha.
reels Five 243 ukuze 1,024 izindlela ukuze ukunqoba slot, lokhu mobileslots iyadlaleka kuwo wonke amadivayisi kusukela 20p kuya 100 ukuze spin. Excellent 3D ihluzo misa ehlathini lapho imvelo sasendle uyaphila. Umculo wangemuva kungaba beats ngizikhandle noma eziphumulele nature umsindo. izilwane Five ezingefani izimpawu on the reels. Lawa izingwenya, amabhere, obunesihluku, izindlovu, futhi amahlosi. Enenani eliphakeme uphawu yilona tiger okunikela 150 zemali for five on a payline. izimpawu Low paying basuke imivini embozwe sidlala amakhadi A, K, Q, J, futhi 10.
Lezi ezinye izici zihlanganisa:
Symbol Ukunwetshwa- Njalo uphawu in the game kungafaki ekhatsi chitha kugcwele butterflies. Uma noma yiluphi uphawu ziphawulwe butterfly siyingxenye combo ngokuwina, itshwayo uyokwendlala kuze agcwalise yonke esondweni.
butterfly Boost- Lesi sici kungenziwa utshelwa ngezikhathi in the game base. Butterflies Flutter mayelana reels futhi basakaza izimpawu zi oyedwa kuya kwabahlanu ezisebusweni spin yokuwina.
osebenzisa free- Three noma ngaphezulu flower icons evele kuphi kule mdlalo base eyoqala lokhu sici. Ungase futhi ukunqoba 15 times your stake bonus if you land four scatters. Kodwa, uma ufike osakaza emihlanu, wena ukhishwa 50 Izikhathi sokuhlushwa ibhonasi yakho. Uma iye yadala lesi sici, uthola ukudlala nge 1,024 izindlela to win. Khona udinga ukuba ukhethe noma iyiphi izimpawu isilwane ezinhlanu. Isilwane ukuthi ukhetha kuyoba value uphawu ephakeme kuphela kwi reels ngesikhathi osebenzisa khulula. Zonke ezinhlanu isilwane eze isibalo esithile osebenzisa mahhala futhi akukho osebenzisa more khulula kungenziwa retriggered.
Tiger unikeza osebenzisa four khulula
Elephant unikeza eziyisishiyagalombili osebenzisa khulula
Bear unikeza osebenzisa free eziyishumi nambili
Crocodile unikeza elishumi elinamithandathu osebenzisa khulula
Cobra unikeza mabini osebenzisa khulula
Jungle Spirit: Call of the Wild iyithuluzi okusezingeni ukuhluka game. Lokhu mobileslots iza izici ezinhle ibhonasi futhi ubukeka amazing.